दिनभरि धर्ना बस्छन्, बेलुका भोकै सुत्छन् उखु किसान ! – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारदिनभरि धर्ना बस्छन्, बेलुका भोकै सुत्छन् उखु किसान !
दिनभरि धर्ना बस्छन्, बेलुका भोकै सुत्छन् उखु किसान !
पुस, काठमाडौं । बुधबार अपरान्ह तीन बजे माइतीघरमा चौथो दिनको धर्ना सकियो । सवा तीन बजेतिर सहयोगी मनहरुले संकलन गरेको खाजा उखु किसान भएको ठाउँमा आइपुग्यो । स्वयंसेवकहरुले प्लास्टिकका प्लेटमा बाँडेका आधी मुठ्ठी खिर, दुइटा पुरी र अलिकति तरकारीले किसानहरुले दिनभरको भोक मेटाए ।
खाजापछि पर्चा–पम्प्लेट बोकेर १० जनाको एउटा समूह धर्नास्थलबाट पूर्वतर्फ सडकपेटीमा बस कुर्न उभिन पुग्यो । घाम पातलिँदैछ । पुस १ गते काठमाडौंको तापक्रम हालसम्मकै कम तीन डिग्री सेल्सियस छ । ७४ वर्षीय गगनदेव राय जाडोले काप्न थालेको उनको हातको स्यानिटाइजरको बोत्तल हल्लिदा देखियो ।
करिब २० मिनेट पर्खिएपछि बा ३ ख ३१४३ नम्बरको बस आयो, जाडोले कामिरहेका रायसहित सबै चढे । बस बानेश्वर, तीनकुने, सिनामंगल हुँदै गौशाला पुग्यो । गौशाला चोकमा ओर्लिएका उखु किसानहरु पशुपतिनाथ परिसरको धर्मशालामा छिरे ।
धर्मशालामा उनीहरुले २४ घन्टाको ३८० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आन्दोलन गर्न ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर आएको १० हजार रुपैयाँ जोगाउन बेलुका नखाई सुत्ने गरेको ७२ वर्षीय रायले बताए । उनको आडैमा बसेका ४५ वर्षीय रामबाबु मण्डलले ‘काठमाडौंबाट जसरी पनि पैसा लिएरै आउँछु भनेर तीन जना बच्चालाई ट्युसन कक्षामा भर्ना गरिदिएको बताए । ‘उता घरबाट सबैका जहानले पैसा पायो कि पाएन भनेर फोनमा सोधेका सोध्यै छन्’, उनले भने, ‘यता काठमाण्डुमा हाम्रो हालत यति खराब छ ।’
आन्दोलन गर्न काठमाडौं हिँड्ने दिन घरमा भएको भैंसी पनि तुहाएको उनले सुनाए । उनकाअनुसार, त्यो भैंसी महिना पुगेर ब्याएको भए कम्तीमा सवा लाखमा बिक्री हुन्थ्यो, त्यसमा थपथप गरेर छोरीको गौना (मंगनी) गरिदिने योजना थियो ।मण्डल धनकौलको अन्नपूर्ण चिनी मिलले दिनुपर्ने चारवर्ष अघिको चार लाख ५० हजार रुपैयाँ बक्यौता उठाउन दोस्रो पटक काठमाडौं आएका हुन् ।
‘मेरो पनि चारवर्ष अघिकै ४ लाख रुपैयाँ बाँकी छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘म पनि आन्दोलन गर्न दोस्रो पटक काठमाडौं आएको हुँ । पोहोर धर्ना दिन आउँदा लागेको १० हजार ऋण अझै तिर्न सकेको छैन ।’
रात पर्दै गयो, दिनभर माइतीघरको चिसो सडकमा धर्ना बसेका उनीहरु थाकेका थिए । फेरि भोलि विहान उठेर त्यही माइतीघरमा धर्ना दिन जानु पनि थियो । ढोका भित्र र बाहिर उभिएका पाँचजना छेवैको कोठा बी ०६ मा पसे । रामबाबु मण्डलले हामीलाई पनि बिदाई गरेर कोठाको बत्ति निभाए ।